Ikamelo elizimele, elinethezekile e-Busselton enhle! - I-Airbnb
Ikamelo elizimele, elinethezekile e-Busselton enhle!
Ikamelo e-i-villa ibungazwe ngu-Jacinta
Ikamelo elilodwa elinethezekile, elizimele kodwa elivulekile endlini yesimanje, ethule e-West Busselton. Eduze kakhulu nenhliziyo yedolobha & ebhishi. Itiye/ikhofi lifakiwe futhi lingena ekhishini ukuze lipheke. Kulula ukupaka emgwaqweni! Imininingwane elula yasendaweni futhi mayelana ne-Busselton, i-jetty yethu engokomlando & indawo yaseNingizimu Ntshonalanga kuhlanganise ne-Margaret River iyatholakala ekamelweni lakho.
Kukhona i-patio enhle enomthunzi nendawo encane yengadi ngaphandle kanye nokupaka ngaphandle komgwaqo endlini yami. Indlu yami inethezekile impela nge-air conditioning egunjini lokuphumula kanye ne-heater encane ekamelweni lakho. Igumbi lokugezela elihlanganyelwayo, indlu yangasese ehlukile, kokubili elinokhiye! Itiye, ikhofi nokusetshenziswa kwefriji kufakiwe!
4.74 · 42 okushiwo abanye
Ungahamba ngezinyawo ukuya ebhishi noma enkabeni ye-Busselton. Eduze kakhulu nezitolo kuhlanganise ne-Market entsha ye-Insins, i-Aldi & K Mart. Itholakala endaweni ethulile enendawo yokupaka engaphandle komgwaqo.
Ngizimisele ukuxoxa ngale ndawo & ukuhamba ngokuvamile kodwa ngingakushiya unokuthula uma ufuna! 🌝 Uzokwabelana ngendlu yokugezela (iminyango inezikhiye zobumfihlo) futhi kukhona indlu yangasese ehlukile enokhiye. Yabelana nami nge-lounge\_ TV nezindawo zokudlela uma uphumula ngemva kokuhlola le ndawo enhle. Indawo enhle yokuhlola i-Southwest of Australia.
Ngizimisele ukuxoxa ngale ndawo & ukuhamba ngokuvamile kodwa ngingakushiya unokuthula uma ufuna! 🌝 Uzokwabelana ngendlu yokugezela (iminyango inezikhiye zobumfihlo) futhi kukhona…